အပေါ် Posted 18.09.2021 19.09.2021
ကံမကောင်းစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများကူးစက်ခံရခြင်းမှခုခံအားမရှိကြပေ။ မည်သူမဆိုမည်သို့ပင်ပြောပြော၊ သင်ကတက်ကြွ။ ကွဲပြားသောလိင်ဘ ၀ ကို ဦး တည်နေပါကမကြာမီသို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းတွင်ဆစ်ဖလစ်၊ ဆီးပူညောင်းကျရောဂါ၊ trichomoniasis၊ လိင်အင်္ဂါရေယုန်စသည့်ရောဂါလက္ခဏာများကိုသင်တွေ့ကြုံရနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ကရိုးရှင်းပေမယ့်ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ရောဂါကူးစက်နိုင်ခြေကိုလျှော့ချနိုင်တယ်။
ပထမ ဦး စွာလက်တွဲဖော်အသစ်နှင့်လိင်ဆက်ဆံသောအခါကွန်ဒုံးသုံးရန်သေချာပါစေ။ အခုသူတို့ကိုအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးနှစ်မျိုးလုံးမှာရွေးချယ်မှုအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာသင်သိပါသလား။ ထို့အပြင်အမျိုးသမီးကွန်ဒုံး၏ထိရောက်မှုသည်အမျိုးသားတစ် ဦး ထက်မနိမ့်ပါ။
အစီအစဉ်တွင်အန္တရာယ်အများဆုံးဖြစ်သည် လိင်မှတဆင့်ကူးစက်တတ်သောရောဂါများ လိင်အမျိုးအစားသည်စအိုနှင့်မိန်းမကိုယ်ဖြစ်သည်။ ကွန်ဒုံးမပါဘဲပါးစပ်ဖြင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်အန္တရာယ်များသော်လည်း၊ မိန်းမကိုယ် / လိင်ဆက်ဆံခြင်းဖြင့်ကူးစက်နိုင်ခြေငါးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းရှိလျှင်ပါးစပ်ဖြင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်သုံးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။
ကွန်ဒုံးသည်သင့်အားရာခိုင်နှုန်းကိုးဆယ့်ကိုးနှင့်ဆယ်ပုံတစ်ပုံအားကာကွယ်ပေးလိမ့်မည်၊ ကိန်းဂဏန်းသည်အတော်လေးမြင့်သည်ဟုသင်မထင်ပါ။ ကံမကောင်းစွာဘဲ၊ လိင်မှတဆင့်ကူးစက်တတ်သောရောဂါများမှရာနှုန်းပြည့်လုံခြုံစိတ်ချရရန်၊ သင်သည် porn ကိုကြည့်နေစဉ်လိင်ကိုလုံးဝစွန့်ပစ်ရမည်၊ သို့မဟုတ်၎င်းအားတစ် ဦး တည်းလိင်ဆက်ဆံပါ။
လိင်မှတဆင့်ကူးစက်တတ်သောရောဂါများမှမိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသော်လည်း၎င်းတို့၏ထိရောက်မှုသည်ကွန်ဒုံးထက်သိသိသာသာနိမ့်သည်။ ၎င်းတို့သည်လိင်အင်္ဂါများကိုဆေးကြောပြီး chlorhexidine နှင့် miramistin ကဲ့သို့ပိုးသတ်ဆေးများဖြင့်ဆေးကြောသည်။ သို့သော်ဥပမာအားဖြင့် douching သည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုပင်ရှိသည်၊ ပိုးရှိလျှင်၎င်းကိုလက်ဖြင့်တို့ခြင်းဖြင့်၎င်းကိုလိင်အင်္ဂါထဲသို့ပိုမိုနက်ရှိုင်းစေလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ပိုးသတ်ဆေးအစားကွန်ဒုံးနှင့်သာတွဲပါ။
စကားမစပ်သတိပြုပါ၊ တားဆေးများ (အမြှုပ်များ၊ လိမ်းဆေးများ၊ suppositories၊ ဆေးပြား) များသည်သင်ဆီးပူညောင်းကျရောဂါ (သို့) ပိုဆိုးလာလျှင် HIV ကူးစက်လျှင်သင့်ကိုကူညီလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းသတိပြုပါ။
အနည်းဆုံးခြောက်လလျှင်တစ်ကြိမ်၊ လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှကူးစက်တတ်သောရောဂါများကာကွယ်ခြင်းသည်ထိရောက်သလောက်နီးပါးဖြစ်သောကြောင့်မကြာခဏလိင်ဆက်ဆံမှုဘ ၀ နှင့်လက်တွဲဖော်ပြောင်းလဲခြင်းကိုမမေ့ပါနှင့်။ ကွန်ဒုံးနှင့်ဤကဲ့သို့သောရောဂါများစွာ၏မတည်မငြိမ်ဖြစ်ခြင်းသည်ကန ဦး အဆင့်တွင်၎င်းကိုကုသရန်မခက်ခဲသော်လည်း၊ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ပို၍ ပို၍ ခက်ခဲလာသည်။
ဆစ်ဖလစ်ရောဂါ: သက်ရောက်မှု, ရောဂါနှင့်ကုသမှု features တွေ
thrush ကဘာလဲ? thrush အမျိုးသမီးတစ်ဦးအနေဖြင့်လူတလွန်နေသည်လား?
နောက်တစ်ခု Sauna မှာဘီယာသောက်လို့ရလား။
61 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,762 စက္ကန့်ကျော် Generate ။